Opera News - Trending news and videos 6.8.2254.142254 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.8.2254.142254 လြန္ခဲ့ေသာ4မိနစ္က
Application မ်ား သတင္းမ်ား & မဂၢဇင္းမ်ား Opera News - Trending news and videos
Opera News - Trending news and videos ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ပရီးမီးယားလိဂ်ပြန်ပါ! ⚽သင်အကြိုက်ဆုံးကလပ် Follow နှင့်နောက်ဆုံးပွဲစဉ် updates များကိုနဲ့ Opera သတင်းများနှင့်အတူတိုက်ရိုက်ရမှတ်များနှင့်အတူအမြန်နှုန်းအထိစောင့်ရှောက်လော့။ နောက်ဆုံးပေါ်ဘောလုံးသတင်းများ, ဗီဒီယိုများ, လ်တာနှင့်စာရင်းဇယားတွေနဲ့ထုပ်ပိုး; သင်ဤနွေရာသီရဲ့ပြိုင်ပွဲများအတွက်လိုအပ်သမျှ! အော်ပရာသတင်းများအားလုံးတဦးတည်း app ထဲမှာ, သငျသညျအကြောင်းအရာများယိနောကျလိုကျ, နောက်ဆုံးပေါ်ဘောလုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၏ထိပ်ပေါ်မှာဆက်နေနိုင်တယ်လုံးဝစိတ်ကြိုက်သတင်း App ဖြစ်ပါတယ်ဖျော်ဖြေရေးဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မျှဝေနှင့်ဒေသခံများနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသတင်းနှင့်အတူလက်ရှိဆက်ကြိုးစားပါ!
အားလုံးထိပ်တန်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်အမျိုးသားပြန်လည်မီဒီယာကပေးပို့တဲ့ - ဖျော်ဖြေရေး, စီးပွားရေး, ဘဏ္ဍာရေး, စီးပွားရေး, နည်းပညာ, သိပ္ပံ, အားကစား, ခရီးသွား, ဖက်ရှင်နှင့်နိုင်ငံရေးအပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်လူကြိုက်အများဆုံးသတင်းဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သြဇာအရှိဆုံး AI အသတင်းအင်ဂျင်အားဖြင့် Powered, Opera ကသတင်းသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအရသိရသည် Real-time, AI အ-စုစည်းထားသောအကြောင်းအရာများကယ်တင်တတ်၏။ ရုံသင်တို့အဘို့ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာများကြည့်ဖို့သင်အကြိုက်ဆုံး channel များကိုလိုက်နာပါ။ ပိုငျသညျကို app ကိုအသုံးပြုဖို့, ပိုကောင်းကြောင့်ဖြစ်လာသည်။ သင့်ရဲ့ဦးစားပေးကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကိုလုံးဝလုံခြုံထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း, အော်ပရာသတင်းများမည်သူမဆိုနှင့်သင်၏ပုဂ္ဂလိက data share ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
Instaclips သင်ခံစားရန်အတွက်နောက်ဆုံးရေပန်းစားဗီဒီယိုများစုဆောင်း။ မည်သည့် website ကနေဗီဒီယိုတင်ခြင်း, Instaclips သူတို့နှင့်အတူမျှဝေပါ။ ဒါဟာသင်ပျော်မွေ့နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူမျှဝေဖို့အဘို့နောက်ဆုံးပေါ်ဖျော်ဖြေမှုများနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ဗီဒီယိုများတစ်ဦးစုဆောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ်, စီးရီးအေ, လာလီဂါ, ဘွန်ဒစ်လီဂါ, လီဂူး 1 အပါအဝင်အားလုံးကိုနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်ဘောလုံးသတင်း၏ထိပ်ပေါ်မှာနေဖို့! သင်အကြိုက်ဆုံးကလပ်အပေါ် updates တွေကို Subscribe နှင့်တိုက်ရိုက်ရမှတ်များနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ရ။
နောက်ဆုံးရေပန်းစားရှာဖွေမှုများကိုတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသိလိုပါသလား တိကျတဲ့ခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြောင်းကိုသတင်းကိုရှာဖွေချင်ပါသလား? အော်ပရာသတင်းများယခုသင်ထိပ်ဆုံးမှာရေပန်းစားရှာဖွေမှုအကြံပြုချက်များပေးသည်နှင့်သင့်အကြောင်းဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်နောက်လိုက်ဖို့တိကျတဲ့အကြောင်းအရာများသို့မဟုတ်လူတို့အဘို့ရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ရှာဖွေရေးဘားပါရှိပါတယ်။
သင် app ကိုဖွင့်လှစ်သည့်အခါဒါမှသင်သက်ဆိုင်ရာသာအဘယ်အရာကိုမြင်, သင်နောက်တော်သို့လိုက်အရာကိုပေါ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဦးစားပေးထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်အခြေစိုက်ခေါင်းစဉ်အကြံပြုချက်များကိုယ်ပိုင်ရနိုငျသညျ။
သင့်အိမ် screen ပေါ်မှာတိုက်ရိုက်အရေးကြီးသောသတင်းများကိုသတိပေးချက်များလက်ခံရရှိသည်။ အမြဲတမ်းသင်တို့ပတ်လည်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းကိုအဆင့်မြှင့်နေဖို့။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့တာဘိုအင်ဂျင်နှင့်သင်၏မိုဘိုင်းဒေတာ၏ 80% အထိသိမ်းဆည်းပါ။
Wi-Fi ချိတ်ဆက်နေချိန်မှာသင့်ဖုန်းသတင်းပုံပြင်များ Save နှင့်အချက်အလက်မသုံးဘဲအကြာတွင်အော့ဖ်လိုင်းသူတို့ကိုဖတ်ပါ။
bookmark ကောင်းသောတွေ့ရှိချက်များနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဖတ်ရှုဖို့ဆောင်းပါးများကိုကယ်တင် - သောအခါ၌ပင်အော့ဖ်လိုင်း!
တွစ်တာ - http://twitter.com/opera/
Facebook မှာ - http://www.facebook.com/opera/
Instagram ကို - http://www.instagram.com/opera
စည်းကမ်းချက်များ & အခြေအနေများ:
ဤလျှောက်လွှာကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းအားဖြင့်, သင်သည် https://www.opera.com/eula/mobile မှာ End User License Agreement ကိုသဘောတူညီကြသည်။ ဒါ့အပြင်သင်ဘယ်လောက်အော်ပရာလက်ကိုင်သင်ယူ https://www.opera.com/privacy မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Privacy ဖော်ပြချက်အတွက်သင့်ရဲ့ဒေတာကိုကာကွယ်ပေးသည်နိုင်ပါတယ်။
Opera News - Trending news and videos အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Opera News - Trending news and videos အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Opera News - Trending news and videos အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Opera News - Trending news and videos အား အခ်က္ျပပါ
vivo-api စတိုး 8.04k 7.41M
Opera News - Trending news and videos ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Opera News - Trending news and videos အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 6.8.2254.142254
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.opera.com/privacy
Opera News - Trending news and videos APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ